नेपालले २२ वर्षपछि भारतलाई जित्दा किन दुःखी छन् कप्तान विमल घर्ती मगर ? - Enepalese.com
नेपालले २२ वर्षपछि भारतलाई जित्दा किन दुःखी छन् कप्तान विमल घर्ती मगर ?
इनेप्लिज २०७२ भदौ १२ गते १५:५३ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १२ भदौ । भारतलाई ट्राई ब्रेकरमा हराउँदै नेपालले २२ वर्षपछि यू-१९ साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ । सातदोबाटोस्थित कम्प्लेक्सको मैदानमा आज भएको फाइनल खेलमा चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भारतलाई नेपालले ट्राइब्रेकरमा ५–४ गोल अन्तरले पराजित गर्दै पहिलो उपाधिमा कब्जा जमाएको हो । २२ वर्षपछि दक्षिण एसियाकै च्याम्पियन बन्दा पनि नेपाली टिमका कप्तान विमल घर्ती मगर भने दुःखी छन् । खेलमा सोचेअनुसारको प्रदर्शन गर्न नसकेपछि उनले दुःख व्यक्त गरेका हुन् । यद्यपी खेल जितेकोमा उनी खुसी छन् । उनले आफूहरुले राम्रो खेलेपनि अन्तिम समयमा सानो गल्ती हुनु दुर्भाग्य बताए । उनले भने, ‘हामीले राम्रो खेल्दाखेल्दै पनि अन्तिममा कमजोर भइदिँदा विपक्षी बोलियो भया, हामीले ६ मिनेट होल्ड गर्न सकेको भए ट्राइब्रेकरमा जानै पर्ने थिएन ।’ यता कप्तान बिमलले दक्षिण एसियामै इतिहाँस रच्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताए । ‘आजको खेल जितेर हामी इतिहाँस रच्न पाउँदा खुसी लागेको छ’, उनले भने, सबैले मायाँ गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद हामी अझैं राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’